Maxaa looga hadlay Shirka Somaliya iyo Beesha Caalamka ee ka furmay Muqdisho? | Dhacdo
Maxaa looga hadlay Shirka Somaliya iyo Beesha Caalamka ee ka furmay Muqdisho?
Shirka Madasha Somaliya iyo Beesha Caalamka (Somali Partnership Forum) ayaa maanta ka furmay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Shirkan oo mid sanadle ah ayaa sanadkii labaad lagu qabtay Magaalada Muqdisho, iyadoo uu shirku daahfuray Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble. Madaxda Dowlad Goboleedyada qaarkood ayaana muuqaalka foggaan aragga uga qaybgalay.
Madasha Somaliya iyo Beesha Caalamka ayaa waxaa maanta diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka, arrimaha doorashooyinka, horumarada laga gaaray iyo qorshe-yaasha soo socda ee taageeridda Somaliya.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa goobta ka sheegay in cid kasta oo cabasho qabto uu xafiiskiisa u furan yahay, si uu ugala hadlo tabashada ay qabto, balse aanu rabitaanka hal qof ka weyneyn Soomaali oo idil.
“Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego gacmaheyga, xafiiskeyga, cid kastoo Soomaali ah oo cabasho ka qabto doorashada iyo habkeeda, waan soo dhaweynayaa. Hal qof kama weyno Soomaali oo dhan, hal qof ra’yigiisa iyo rabitaankiisa Somaliya ayaa ka weyn.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Rooble.
Shirka ayaa sanadkan ku soo aadaya, xilli muran badani uu hareeyay doorashooyinka lagu wado in ay dalka ka dhacaan.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa soo hadalqaaday in safaro uu ku soo kala bixin doono Magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo, Dhuusamareeb iyo Kismaayo.
“Safarkeyga ayaa hadda ku wajahan sidaan ku heshiinay Madaxweyne Deni inaan ku gaaro Garoowe, haddii Alle idlmo, oo aan kala hadlo arrimahaas. Sidoo kale aan soo maro Gaalkacyo, aan ku xijiyo Dhuusamareeb, ka dibna Madaxweyne Axmed Madoobe waxaan ku heshiinay marka uu ku soo noqdo Kismaayo inaan toos u aado halkaa, isaga ayaana uga fadhiyaa.” Ayuu yiri Rooble.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey Meertada 76aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa kaga hadlay geeddi-socodka...